Yakanyanya mhando China Anti Grass Mucheka UV Kurapa Zvekurima Ground jira
Mission uye Vision
The bhizinesi tsika
Yakanyanya mhando China Anti Grass Mucheka, Weed Kudzora Mat, isu tinogara tichichengeta kiredhiti yedu uye nerubatsiro kune mutengi wedu, tichisimbirira sevhisi yedu yemhando yepamusoro kufambisa vatengi vedu. gara uchigamuchira shamwari dzedu nevatengi kuti vauye kuzoshanyira kambani yedu uye kutungamira bhizinesi redu, kana iwe uchifarira zvekutengesa zvedu, unogona zvakare kuendesa ruzivo rwako rwekutenga online, uye isu tichakubata iwe nekukurumidza, tinochengeta kubatana kwedu kwechokwadi uye ndinoshuvira kuti zvese zviri kudivi rako zvakanaka.
Hunhu hwejira rinodzivirira huswa (horticultural ground cloth)
(1) Simba guru. Nekuda kwekushandiswa kwepurasitiki flat waya, inogona kuchengetedza yakakwana simba uye kureba mumamiriro ekunyorova uye akaoma.
(2) Corrosion resistance, kureba kwekugara kwecorrosion muvhu nemvura ine pH yakasiyana.
(3) Kupinda zvakanaka kwemvura. Pane mikaha pakati peshinda dzakati sandara, saka ine mvura yakanaka kupinda mukati.
(4) Zvakanaka anti-microbial properties, hapana kukuvadza kune microorganisms uye zvipembenene.
(5) Kuvaka kuri nyore. Nekuti izvo zvinhu zvakareruka uye zvakapfava, zviri nyore kutakura, kuisa uye kuvaka.
(6) Simba rekupwanya rakakwirira, rinosvika 20KN/m kana kupfuura, kunaka kukwira nekuramba uye kusagadzikana kwemarara.
Hunhu hwejira reuswa
1. Shandisa misimboti yemuviri kudzivirira photosynthesis yemasora. Masora haavhenekerwi nechiedza uye anorasikirwa nemamiriro anodiwa ekukura kuti awane kusakura.
2. Rudzi urwu rwejira rine mhepo yakanaka uye inogona kutorwa zvakananga uye kupeperetswa kuti iedzwe. Kubatsira kwemhepo yemhepo ndeyokuti ivhu haringagadziriswi, midzi yevhu inogona kufema zviri nani, ma microorganisms ari muvhu haazoderedzwa, uye nzvimbo yekukura kwemiti haizokanganisi.
3. Mvura inonaya uye yekudiridza yekugadzira (drip irrigation / spraying) inogona kupinda zvakananga kare kuti inyore nemidzi, uye haizokonzeri midzi retting seisingapindiki sefirimu repurasitiki. Zvirinani kufambisa kushandiswa kwefetereza yemvura, kudiridza uye manejimendi.
4. Kana fetereza yaiswa pazvirimwa, inova neimwe mashandiro ekuchengetedza fetereza panguva yekunaya kwemvura, kudzivirira mvura yemvura kubva pakusuka uye kutiza fetereza. Mushure memvura, ivhu rinogona kuchengetwa rakanyorova kwenguva yakati, kuderedza kuwanda kwekudiridza.
5. Yakabatana nekusvibiswa kwepurasitiki yakachena yakataurwa pamusoro apa, jira reuswa-uswa rudzi rutsva rwechigadzirwa chezvakatipoteredza, chinogona kugadzirisa nguva yekuora maererano nenguva yekukura kwezvirimwa. Kana nguva yekudzikisira yasvika, inongodzikira mumvura nekabhoni dhaokisaidhi yodzokera kune zvakasikwa, izvo zvisingasvibise ecology.
Kushandiswa kwejira reuswa
1. Inoshandiswa zvakanyanya mune zvekurima. Micheka isingapindi masora inogona kushandiswa mukutarisira bindu, kudyara miriwo, miti yemichero yemumakomo, kudyara mbesa, minda yetii yemishonga, nezvimwewo. Zviri nyore kubata zvirimwa uye zvakare zvinogona kuderedza mari yevashandi.
2. Kurima nharaunda, dzimba dzekuchengetedza zvakatipoteredza, mapaki, nzvimbo dzemiti dzinoyevedza, migwagwa, magadheni emaruva, uye nzvimbo dzine tsvarakadenga zvinogona kuderedza zvakanyanya mari yekusakura nevashandi vehutsanana, kuwana nzvimbo yakachena uye yakatsvinda yegirinhi, uye kuwedzera runako rwekuona.
3. Tsvagiridzo nekuvandudzwa kwemachira-uswa-usingagadzirise chete dambudziko rekusvibiswa kwechinyakare firimu repurasitiki rekurima, asi zvakare rinogonesa vanhu kuchengetedza zvirimwa mubindu remichero, kutonga kwakasvibirira kwenzvimbo inoyevedza, uye nekudzikisa zvinobudirira kupinza. yemitengo yebasa.
Zvakapfuura: Factory wholesale China Garlic uye Onion PP Plastic Weed Control Mat/Yakarukwa Dema Anti Grass Jira rine Makomba
Zvinotevera: Weeding uye weeding jira roll
Mucheka Wesakura Unofema Weminda Yekurima
Ecological Weeding Control Mucheka
Bindu Anti-Kuchembera Weeding Mucheka
Mucheka wakakobvu Pp Weeding
Weed Barrier Horticulture Weeding Mucheka
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri
Kusakura Mucheka Wehuswa Mvura yekusakura inopindika
China PP Polypropylene Yakarukwa Saga Bhegi Pack floor...
Nyanzvi Dhizaini China PP Nyika dzekurima...
Fekitari kugadzira China PP Polypropylene Super Wid...
Inokodzera marudzi ese ekushandisa, epurasitiki PP akarukwa ...
Weeding uye weeding jira roll
Heavy Duty Weed Barrier, Biodegradable Weed Control Fabric, Pp Woven, Kusakura Mumucheka, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Weed Control Fabric Roll,